नवीन घिमिरेलाई अख्तियार प्रमुख आयुक्त बनाउने तयारी, को को छन् आयुक्तको लबिङमा ? – Medianp
नवीन घिमिरेलाई अख्तियार प्रमुख आयुक्त बनाउने तयारी, को को छन् आयुक्तको लबिङमा ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, साउन २२, २०७५०९:०६0
काठमाडौं, २२ साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कायममुकायम प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे ‘कन्फर्म’ प्रमुख आयुक्त हुने भएका छन् । सरकारले उनलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने तयारी गरेको हो ।
अब बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकले घिमिरेलाई प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्ने स्रोतले बताएको छ । अख्तियारमा हाल घिमिरे कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त छन् भने आयुक्तहरूमा डा.गणेशराज जोशी, राजनारायण पाठक र सावित्री थापा गुरुङ छन् । संविधानको धारा २३८ अनुसार अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त गरी पाँचजना रहने ब्यवस्था छ ।
वरिष्ठताका आधारमा आयुक्तहरूमध्येबाट घिमिरेलाई प्रमुख आयुक्त बनाइन लागेको हो । घिमिरेलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन सिम्रिक एयरका मालिक रामेश्वर थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष्ँ लबिङ गर्दै आएका थिए । का.मु. प्रमुख आयुक्त घिमिरे राष्ट्रपति विद्या भण्डारी रक्षामन्त्री भएको समयमा रक्षा सचिव भएका थिए । घिमिरे राष्ट्रपतिको निकट र प्रधानमन्त्री केपीको गृहजिल्ला झापाकै भएकाले उनलाई प्रमुख आयुक्त बनाइन लागेको हो ।
पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री पनि प्रमुख आयुक्तका दाबेदार हुन् । अहिले अख्तियारमा एक आयुक्त पद खाली छ । नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त तीन उच्च अधिकारी आयुक्त हुने दौडमा शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । अख्तियारमा रिक्त एक आयुक्त नियुक्तिका पूर्वआइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल पनि दौडधूप गरिरहेका छन् । उनी ब्यापारी अजयराज सुमार्गीमार्फत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रभावमा पारी आयुक्त हुने दाउमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।
अर्याललाई आयुक्त बनाउन रसियन ब्यापारी डा.उपेन्द्र महतो पनि सक्रिय भएको प्रहरी स्रोत बताउछ । केएमजीका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको शक्ति प्रयोग गरेर पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले पनि अख्तियारको आयुक्त बन्न रहर गरेको स्रोतको दावी छ । त्यस्तै, केशरीराज घिमिरे नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको नाम भजाएर आयुक्त हुने चक्करमा लागिरहेका छन् । घिमिरे चितवनका भएकाले प्रचण्डले आफूलाई आयुक्त बनाउने आशामा छन् उनी ।
भवन भट्ट अध्यक्ष भएको एक वर्षपछि एनआरएनएमा ‘विद्रोह’, युरोपस्तरीय सम्मेलनमा हस्तक्षेप गरेको आरोप